Ọ bụrụ na ị na-achọta onwe gị rapaara na a Pet Rescue Saga larịị chọta ụfọdụ ngụgụ obi na eziokwu ị na-eleghị anya ọ bụghị naanị! The ozi ọma e nwere ụfọdụ azum dị na-agbalị na crunch gị site ụfọdụ siri ike karị ugboro. Isi ihe na-egwuregwu a na m kweere bụ pụta, ọ bụla na-akpali gị ime ka ga-enwe a pụta na ya ruo gị apụ chepụta ihe ị chọrọ ime na otú kacha mma ime nke a.
Ụfọdụ ngọngọ bụ na ngịga, ndị a nwere ike ẹkeyakde site n'ibibi n'akụkụ blocks …ma ọ bụghị site na balloons!
Mbụ ị chọrọ na-amata gị board, nwere ị a ọnụ ọgụgụ dị nta nke Nkea? ma ọ bụ bụ a bụrụ na nke ọ bụla pụtara na o kwere omume? na e balloons, ngịga, Pita igbe, iyi, akpọchi ndị chọrọ igodo ma ọ bụ bombs na mkpa ka a ga-agbaji free? E nwere nnọọ ole na ole dị iche iche ihe na egwuregwu a na figuring otú capitalize na onye ọ bụla n'ụzọ dị irè bụ mkpa!
acha balloons – mara mma dị mfe kụrụ a red balloon na niile red brik akwụsị, ma ha na-kpọchiri ya akpọchi. Balloons adịghị mkpa-adịkwa ọ bụla ọzọ brik na pụrụ ịbụ kemfe ikpochapụ a osisi na ole na ole kwere omume ọkụ, dị nnọọ na-n'uche ma ọ bụrụ na ị na-afụ ha elu na a bọmbụ ha agaghị na-arụ ọrụ. Use balloons wisely to create bigger matches.
ngịga – Ụfọdụ na ọkwa nwere brik ná ngịga, i nwere na-kụrụ a na-n'akụkụ egwuregwu ka onwe brik ha aka-ebibi. Ọ bụ mgbe mkpa na-elekwasị anya gwakwara ndị a kpọchiri ya akpọchi nkanka ma ị pụrụ ịchọta onwe gị nke Nkea.
bombs – ndị a dị nta nwa beauties eme ihe bombs na-best..they gaa ọganihu! dị nnọọ ntakịrị ọganihu, ihe ọ bụla kwa ịrịba ama ebe a ma na gburugburu brik ga-ebibi, zuru okè maka ekpocha ụzọ a furu efu obere pooch, Na-amasị m na-azọpụta m bombs na-eji na nnọọ ala. Rịba ama na ị nwere ike gawa a bọmbụ na-esote a Pita nnọọ n'enweghị, ha n'ezie Na iyi-uche! Ụfọdụ na-etoju nwere bombs encased na iko na kwesịrị na-kụrisịa mbụ.
Atọhapụ bombs nwere ike-azọpụta ruo mgbe a Pita bụ dị n'elu ya.
kpọchiri akpọchi nkume! – ị mara otú unu ga-esi na agụụ na igbachi elu a nkume? dịghị? ọma onye na King ka, agbanyeghị igodo na-ezo na osisi, n'ozuzu na a iko ikpe na kwesịrị ka a kụrisịa oghe site ma ọ buru àmà n'ala ma ọ bụ na a siri ike na oké nkume, anwụrụ, bit nke ụwa ma ọ bụ ndị ọzọ random feature (bụghị jidesie ọzọ iko igbe ezie) ozugbo isi na-tọhapụrụ ị Na nwere iji ya ozugbo, ọ ga kpọgidere gburugburu ruo mgbe ị chọrọ iji ya. Nkanka ma ọ bụ anu ulo Na dobe gara aga ekpochi nkume, nke bụ ya mere ha mkpa ha na-enwere onwe ha na akpa ebe!
Double ended spring – a obere mpempe geniusness ozugbo ọrụ kwagaa ihe dum akara ịgbasapụ ma ntụziaka, ha karịsịa bara uru mgbe metal igbe!
Metal igbe – yeah ha na-adị…M Na mara ihe mere? dị nnọọ ihe mmezi kwukwara ọsọ akpọ ụkwụ n'ihe m maa. Ha nwere ike ghara ekwekọghị na ihe ọ bụla ga-ebibi ..unless ya a bọmbụ ma ọ bụ a spring! Ha nwere ike karịsịa iwe ma ọ bụrụ na ị jikwaa na adaa gị anu ulo na ha dị nnọọ ka ha ga-esi na ala, enweghị ihe na-akụ aka ha na ha dị nnọọ nọdụ ala n'ebe.
nwetụla mgbe a obere boxed na?
Top Pet Rescue Atụmatụ na usoro, 10.0 out of 10 based on 1 rating